Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, “waan sii wadi doonaa weerarada ka dhabka ah al-shbaab” – STAR FM SOMALIA
Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, “waan sii wadi doonaa weerarada ka dhabka ah al-shbaab”
Dowladda Federalka Somaliya ayaa waxa ay ku hanjabtay in la joogteyn doono weerarada kala duwan ee lagu haayo Ururka Shabaab, xilli Bishan gudaheeda la beegsaday labo Saldhig oo Shabaabka ay ku leeyihiin Gobolada dalka.
Wasiirka Warfaafinta Xukuumadda Somaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, ayaa sheegay iyadoo laga duulaayo qorshaha adkeynta ammaanka dalka Somaliya in Dowladda ay kordhin doonto beegsiga Shabaabka lagu haayo.
Wixii ka dambeeyay weeraradii ka dhacay Magaalooyinka Baydhabo iyo Muqdisho oo Shabaabka ay ka dambeeyeen, ayuu Wasiir Maareeye sheegay in sare loo qaaday heerka feejignaanta dhanka amniga ee Dowladda ay gashay.
Wasiir Maareeye, ayaa tilmaamay iyadoo la kaashanayo Dowladaha taageerada kala duwan siiya Dowladda Somaliya in la ballaarinaayo weerarada Shabaabka ka dhanka ah.
“Ciidamada dowladda oo kaashanaya dowladaha aan saaxiibka nahay, waxa ay jab xoogan u geysteen argagixisada Al-Shabaab, wayna sii socon doonaan howlgallada ka dhanka ah maleeshiyada Al-Shabaab, waxaana shacabka ka codsaneynaa inay la shaqeeyaan ciidamada amniga.” Ayuu yiri Wasiirka Warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareeye.
Diyaaradaha Drone-ska Mareykanka ayaa bartilmaameedsaday Deegaanka Raaso Xero ciidan oo ku taallo oo Shabaabka ay ku diyaarinayeen ciidamo, halkaasina waxa ay ku dileen ku dhawaad 150 Askari oo Shabaab ah sida Mareykanka uu sheegtay.
Sidoo kale ciidamo ka tirsan kuwa Kumaandooska Dowladda Somaliya oo taageero ka helaya Ciidan Mareykan ah ayaa howlgal qorsheysan, waxa ay ka fuliyeen Degmada Awdheegle ee Gobolka Shabeellaha hoose, iyadoo howlgalkaasi Khasaare lagu gaarsiiyay Shabaabka.
Al Shabaab ayaa muddooyinkii dambe la kulmaayay hujuum kaga imaanaya ciidamada Dowladda iyo kuwa Amisom.